Dib u milicso saddex sano ka hor maanta oo kale qaraxii Isgoyska Zoobe – AfmoNews
Dib u milicso saddex sano ka hor maanta oo kale qaraxii Isgoyska Zoobe
Batuulo Sheekh Axmed Gabale, Gudoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka ayaa dhawaaq aan horey looga maqal geyiga Soomaalida ku sifeysay qaraxaasi iyo waxyeeladii uu gaystayba.
Gudoomiyaha Ururka Haweenka oo maalin ka dib qaraxaasi ka qaybgashay bannaanbax looga soo horjeeday ayaa waxay tiri “Si gar iyo mag la’aan ah loogu qarxiyay baabuur laga soo buuxiyay walxaha qarxa ma dhihi karo, nukliyeer baa baabuur lagu soo shubay, waa nala dhex dhigay, waa nalagu gubay. Waxa nagu gubayna waa carruutii aan dhalnay oo aan korinay, oo aan kabinay. Waxaan nahay hooyooyin gablan ah, oo bannaanka iyo gudaha ku gablan ah.”
Batuulo Sheekh Axmed Gabale oo ka hadleysay wixii ay indhaheedu qabteen ayaa tiri “Qof Soomaali ah oo hilibkiisoo gubtay bac lagu shubo oo dhulka hoostiisa la geliyo, waa taariikh ooyin leh, waa taariikh madow, waa wax maanta Soomaali keeni kara ama inaan jirnoo dagaalano ama in nala laayo oo aan saa u hoggano, oo aan waxba qabsan kari weyno oo adduunyada nalaga dabar-tiro.”
Ma jirto cid sheegatay masuuliyadda qaraxaasi, balse Dowladda Federaalka ayaa ku eedeysay Ururka Al Shabaab, oo ka biyo diidan jiritaanka Dowladnimada Somaliya iyo jooggitaanka dalka ee Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika.
Sheekh Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) oo laba bilood ka hor qaraxaasi isu soo dhiibay Dowladda Federaalka ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in qaraxaasi ay gaysteen Shabaabka.
Qaraxan ayaa loo aqoonsaday inuu yahay kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca dalka, gaar ahaan Magaalada Muqdisho, marka aad eegto boqolaalka qof ee mar qura ku dhintay hal qarax oo keliya.
Warbaahinta Caalamka ayaa ku warantay in qaraxan uu noqonayo kiisii ugu weynaa, ee ay dunida ka gaystaan kooxaha jihaadiyiinta.
Sidoo kale qaraxii Zoobe ayaa lagu tilmaamaa mid mideeyay shacabka Soomaaliyeed, ha yeeshee dadka wax ku qora barraha bulshada ayaa Villa Somalia ku dhaliilay inaanay ka faa’iideysan baraaruggii shacabka ee xilligaa.
Si kastaba ha-ahaatee su’aasha weli dadka maskaxdooda ka guuxeysa ayaa ah, cid kastoo qaraxaasi ka dambeysayba sababta ay u bartilmaameedsatay goob ay rayidku ku badan yihiin.